တစ်ခုတည်းအတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ။ နှင့်မေတ္တာရှင်မဟုတ်။ သင်တို့ကိုစုံစမ်းပြီအားလုံးအစဉ်အလာနည်းလမ်းတွေရှာတွေ့မှအထူးတစ်စုံတစ်ယောက်အတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ? သင်ငြီးငွေ့၏ဖိလစ်ပိုင်ဘားကလပ်မြင်ကွင်းတစ်ခု၊လာမယ့်အိမ်မှတစ်ဦးအချည်းနှီးသောအိမ်၊အထီးကျန်ကျောက်ပြားကိုအဘို့အ တဦးတည်းမှာအဲဒီမန်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစားသောက်ဆိုင်များ၊ဆိုးရွားမျက်စိကန်းရက်စွဲများအားဖြင့်သင့်ရဲ့အောင်သွယ်သူငယ်ချင်းများ၊ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဒေသခံတစ်ဦးတစ်ယောက်အုပ်စု၊တစ်ဦးတစ်ယောက်အဖြစ်အပျက်များနှင့်အစည်းအဝေးနှင့်မျှမတို့ရလဒ်များကို? ဆက်သွယ်ထားသောတစ်ဦးတစ်အရာအခမဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်ရပ်နိုင်စေ မိတ်ဆွေတွေနဲ့တွေ့ဆုံရန်ဖိလစ်ပိုင်တစ်ဦးတစ်။ ရှာဖွေလှုပ်ရှားမှုမိတ်ဖက်၊သူငယ်ချင်းများ၊အေးမြသောနေ့စွဲသို့မဟုတ်အရစာန်၊ေပေါ့ပေါ့သို့မဟုတ်နှစ်ရှည်ဆက်ဆံရေး။ တွေ့ဆုံအရည်အသွေးတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်အသင့်ရဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဧရိယာသို့မဟုတ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း(တစ်ဦးတစ်ယောက်၊ကနေဒါတစ်ဦးတစ်ယောက်၊ဗြိတိန်တစ်ဦးတစ်၊တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်အနောက်ဥရောပနှင့်ဩစတြေးလျ)ကိုလိုက်ရှာသည်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၊ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊အိမ်ထောင်ရေး၊စိတ်ကူးယဉ်သီချင်း၊သို့မဟုတ်ပဲတစ်စုံတစ်ဦးကချက်တင်သို့မဟုတ်နှင့်အတူထွက်ဆွဲထား။ ပူးပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးထွားလာတစ်ဦးတစ်အသိုင်းအတွက်ဖိလစ်ပိုင်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ရခမဲ့မေးလ်၊ချက်တင်၊၊ဘလော့ဂ်များ၊နှင့်ရိုင်းပေမယ့်ဖော်ရွေချိန်းတွေ့ဖိုရမ်များ။ ရာက္ၾခမဲ့ဖိလစ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြော်ငြာများနှင့်ဓာတ်ပုံများ။ ဆက်သွယ်ပြောဆိုနှင့်အတူအခမဲ့အရည်အသွေး၊အောင်မြင်၊ပျော်စရာ၊စိတ်လှုပ်ရှားစရာၾကာင္းပိုင္တစ်ဦးတစ်ယောက်-အခမဲ့မည်သည့်စွဲချက်။ အဖြဲ့အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ အဘယ်သူမျှမခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုလိုအပ်နေပါသည်။ အဘယ်သူမျှမကုန်ကျစရိတ်များအတွက်မည်သည့်အင်္ဂါမှာချိတ်ဆက်တစ်ဦးတစ်။ မှာချိတ်ဆက်တစ်ဦးတစ်ယောက်၊လူအပေါင်းတို့သည်အင်္ဂါလုံးဝအခမဲ့အတွက်:အခမဲ့အီးမေးလ်များ၊ပန်းပွင့်များ၊ဖိုရမ်များ၊ဘလော့၊လိမ္လည္မႈ၊ကဒ်များ၊နှုန်းဓါတ္ပံု၊ဗီဒီယို၊ချက်တင်အခန်းပေါင်း၊၊တစ်ဦးတစ်ပါတီ၊နှင့်ပိုပြီး။ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? ပူးပေါင်း ဆက်သွယ်ထားသောတစ်ဦးတစ်ခုနှင့်ဆက်သွယ်ဖိလစ်ပိုင်တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်အခမဲ့”ငါနိုင်ပါတယ်မိန်းကလေးအမျိုးအစားသောသူယောက်ျားမှာကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပိုပြီးလိုချင်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်တော့မှဖြစ်လာအမျိုးအစားအမျိုးသမီးအမှားတွေအတွက်ကလေးရဲ့မျက်လုံးများအတွက်စိတ်အားထက်သန်အတွက်။ အကြီးမြတ်ဆုံးအရည်အသွေးအဖြစ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖို့စွမ်းရည်ကိုတည်ဆောက်ယောက်ျားနှင့်သူ့ကိုခ။ ငါကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်များကြည့်ဖို့၊ဖတ်စာအုပ်များ၊ကစားဘော်လီဘော၊ကြက်တောင်၊တင်းနစ်။ နှင့်စစ်တုရင်အကြှနျုပျ၏ကိုယ်ရေးအရာမှန်(ငါ၏နာမကိုအမှီ၏သင်တန်း)ငါကဲ့သို့ဥယျာဉ်၊ငါရှိသည်ဖို့ချင်တယ်ပဳစာကြည့်တိုက်အတွက်ငါ့အိမ်ကိုတစ်နေ့၏ရုပ်ပုံများကနေငါ့ဆီဖုန္းမ။ ကျိန်းသေူဘာသာစကားမ်ားကိုေျပာဆိုသည္၊ဂရုစိုက်ခြင်း၊ချဉ်းကပ်ရ။ ငါချစ်ရှာဖွေစူးစမ်းမှုအရာ၊စတုတ္ထအခြားနေရာများ၊ကမ်းခြေသွားနှင့်ချက်ပြုတ်။ အားကံုးေ၊လွတ်လပ်သောနှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်နှင့်အတူတစ်ဦးအေးဆေးတည်ငြိမ်အေးမြရွစ္ေ။ အတော်အဆောက်အဦးအပြင်၊ကမ်းခြေနှင့်တောင်။ တက်ကြီးထွားလာနှင့်အတူသဘာဝအကျွန်ုပ်ပတ်လည်တွေ့ရှိကိုယ်ပျော်ရွှင်ပြီးအခမဲ့။ ငါခရီးသွားလာခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံကကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှု။ မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။ ငါခဲ့သည်ဘယ်တော့မှခဲ့ပြီးတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်ရှာဖွေနေရှေ့၌ငါ့အဘို့ ပိုကောင်း။။။။။ သူငါဖြုန်းနိုင်ငါ့အသက်တာနှင့်အတူ။ မရှာဖွေနေများအတွက်ယာယီ။ ငါအလေးအနက်နှင့်သစ္စာလျှင်ကျနော်တ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ဖြစ်ခြင်းဤလူမျိုးသည်ကြောက်စရာသစ္စာသည်။ ကိုယ့်အလွန်သာမန်၊လှသောအတွင်းပိုင်းကနေပြီးပညာတတ်။ အလွန်မေတ္တာနှင့်ကမ္ဘာမြေချ။ ငါလွယ်ကူသောရဖို့။ ငါဟာကခုန်၊ဗိုဇ်၊လို့ပါ။ ငါချစ်စွန့်စားပြီးငါမှပွင့်လင်းဖြစ်ကြောင်းကိုအသစ်သောအရာတို့ကိုသင်ယူသည်။ ရိုးရှင်းသောအရာတို့ကိုအောင်ငါ့ကိုအမင်္ဂလာရှိ၏။ ၾကည့္ရႈသည္အနေ၊ခုန်အတွက်အမိုး၊။ မင်္ဂလာပါယောက်ျားတွေမည်သို့။ အားလုံးကိုတွေ့ရပါ၏တစ်ခုတည်းနဲ့ဘယ်တော့မှလက်ထပ်ခဲ့ပြီးမျှကလေးတွေကကျွန်မရဲ့မိသားစုနဲ့သူငယ်ချင်းတွေငါ့ကိုအဖော်ပြရန်အဖြစ်ခင်မင်ရင်းနှီးသူတစ်ဦး၊ရိုးသားသောသစ္စာကြင်နာနှလုံးချိုမြိန်မေတ္တာပါဂရုစိုက်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာမြေချ။ ငါ၌နေထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်ကိုင်ပေသည်။ ငါမဖော်ပြရန်၊ကိုယ်ကျွန်မတို့စကားပြောနိုင်ကအကြောင်းကိုကျော်ဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုသို့မဟုတ်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏စကားပြောဆိုလျှင်ဒဏ်ငွေရဲ့။ ငါမပေးအများဆုံးငါ့အချိန်အများငယ္ဆံုးငါ၏အမှု၏၊(ပြဲ)ငါ့အခမဲ့အချိန်သည်ညအချိန်တွင်သာဤမျှလောက်ကိုပေးနိုင်ပါသည်အနည်းငယ်မည္နံနက်တိုင်အောင်။ ငါဖြစ်သော၊ မေတ္တာပါဂရုစိုက်နားလည်မျိုးသမီး။ ငါဖြစ်၏သုံးဆယ်ကိုး။ အရွယ်ကျွန်မသမီးကသမီးတစ်ဦး။ အခက်-အလုပ်အဖွဲ့မိခင်ပါ။ ။ အဘယ်သို့ငါဖော်ပြရန်ကိုယ်? ငါရယ်တစ်ခုတည်းလက်ထပ်ဘယ်တော့မှ၊သူတို့ကအစဉ်အမြဲရှာဖွေငါ့ကိုအရိုးရှင်းတဲ့ရဲ့၊ငါ့သူငယ်ချင်းတွေအမြဲပြောပြကြောင်း၊ငါ့ကိုကျွန်မချက်ပြုတ်ဖို့ကိုချစ်၊ပုံပြင်များဝေမျှဖို့၊ငါ့မိသားစု၊သူတို့အရွယ်ဖက်ရှင်တစ်ခုကြောင့်ငါတက်ကြီးထွားနှင့်အတူအဖွားအကြောင်း၊အဘယ်ကြောင့်ယခုတိုင်အောင်ငါနှိုးဆော်။ ဆက်သွယ်ထားသောတစ်ဦးတစ်ယောက်အမှန်တကယ်အရာအခမဲ့။ အတော်များများဟာအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုအမည်ခံအခမဲ့၊ပြီးတော့သင်အံ့သြသွားနှင့်အတူစွဲချက်များအဖြစ်ဆက်သွယ်ခြင်းအခြားအဖွဲ့ဝင်များ၊ကျယ်ပြန့်ရှာဖွေ၊ကြည့်ရှုပရိုဖိုင်းသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံများ၊စသည်တို့ကို။ ဆက်သွယ်ထားသောတစ်ဦးတစ်လုံးဝအခမဲ့-ကို-အသုံးပြုမှုများအအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှု(အရာအားလုံးအခမဲ့)ေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတည်ပြုအဖွဲ့ဝင်များဖိလစ်ပိုင်အတွက်။ အားလုံးအင်္ဂါအပေါ်ချိတ်ဆက်တစ်ဦးတစ်ယောက်စွဲချက်မပါဘဲ၊အဖိုးအခ၊ခရက်ဒစ်၊ကူပွန်သို့မဟုတ်အံ့သြ။ ယခုအခမဲ့”
အခြားအက်ဥပဒေ(ဝန်ဆောင်မှု)ရပ်လူ၊သက်သေပြဖို့အကြည်၏မေတ္တာတော်အတွက်အမျိုးသမီး၊သူမ၏မိသားစုအကူအညီနှင့်အတူတာဝန်များကိုနှင့်သင်အိမ်တော်ပတ်လည်အတွက်။ ခေတ်သစ်-နေ့ကဖိလစ်ပိုင်နေစဉ်၊ဤအတိအကျလုပ်ရပ်များမရှိတော့၊ပိုပြီးခေတ်ပြိုင်အမျိုးအကြာနေရာ။ ဒါကြောင့်အခုထိလ့ထိုလူအဘို့အအချိန်ဖြုန်းဖို့”အနိုင်ရမိန်းကလေးကျော်”နှင့်အတူချိုမြိန်မက်ဆေ့ခ်ျများ၊သေးငယ်တဲ့ဟာလောလောဆယ်တော့လက်ဆောင်တွေ၊နှင့်ကျိန်လုပ်ရပ်ဖြစ်လာမှသူမနှင့်နေရပ်။ ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသားအသုံးပြုကြသည်ကိုဆက်ကပ်အပ်နှံဖို့အချိန်အလိုက်အမျိုးသမီးသူတို့ကြိုက်(တခါတလေ၊ပင်လျှင်အမူအမကစုန္း)အဖြစ်မှသက်သေ တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ၏သူတို့ရဲ့မေတ္တာ။ ပဲရစ်အဖြစ်လူသိများသည်မြို့၏မေတ္တာနှင့်အီတလီအဖြစ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်ပြောင်လူသိများအကြောင်းအဖေ့တြမန်။ မသာသူတို့အနူးညံ့သိမ်မွေ့သောစိတ်ဝိညာဉ်ကို-မေတ္တာ၊ရက်ရောသော၊နှင့်အမှန်တကယ်မြှုပ်နှံသည့်အခါသူတို့ယုံကြည်သူတို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်”တ”-ဒါပေမယ့်သူတို့လည်းအရမ်းကြိုက်မွှေးမူ။ ချိန်းတွေ့စဉ်အခါအဖိလစ်ပိုင်၊မျှော်လင့်ကောင်းသောနံနက်မက်ဆေ့ခ်ျများနိုးသင်နံနက်တိုင်းနှင့်မွှေးသောကောင်းသောညဉ့်ကိုလေလံသင်ပယ်အိပ်။ မျှော်လင့်ထားသေးငယ်တဲ့အမူအတူ၊တစ်ဦးအံ့အားသွားရောက်ကြည့်ရှုသို့မဟုတ်သင်ဆောင်ခဲ့(သေရစာ)၊ကိုယ့်ကြောင့်။ နှင့်ဤအမူအနိုင်စေရန်နှင့်အလွန်ထူးခွားသောအကြေးခွံပေါ်တွင်အထူးအခါသမယ၏မွေးနေ့၊နှစ်ပတ်လည်၊သို့မဟုတ်ချစ်သူများရဲ့နေ့။ ပဲသတိရ၊အဖြစ်အများကြီးအဖြစ်သူတို့ချစ်ပေး၊သူတို့ကိုသူတို့ချစ်ကိုလက်ခံပါတယ္။ အခါ၊ကချိန်းတွေ့ဖို့ကြွလာသောအဖိလစ်ပိုင်၊သင်ဖို့ရှိသည်မည်မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းအများကြီးအသေးစားစီးပွားရေးမှုတ်ချိုးအစား၏ထွက်။ လစ္ပိုင္ယေဘုယျအားဖြင့်အလွန်အမ-မောဂ္ဂလာန်။ ဒါကဖြစ်ပါသည်၊သူတို့ကသူတို့ရဲ့အခက်ခဲဆုံးကြိုးစားရဆုံးရှုံးဖို့မဟုတ်ဘဲသူတို့၏ဒေါသနှင့်မတုံ့ပြန်နှင့်အတူအမျက်ဒေါသ။ အစားရင်ဆိုင်သင်၏ဒေါသအမျက်၊သူတို့များသောအားဖြင့်အပန်းဖြေဖို့အနည်းငယ်အက်ဥပဒေဟုခေါ်မှတုန့်ပြန်အတွက်တစ်ခုခုသင်ပြုသောအမှုဖွင့်၊သင်သတိထားမိပါလိမ့်မယ်သောဖြစ်ဖို့သူတို့ကိုသိသိသာသာလျော့နည်းစေနိုင်တယ်၊ဓါတ်၊နှင့်ထက်သန်။ သူတို့မပြုစေခြင်းငှါလိပ်စာသင်တိုက်ရိုက်နှင့် သင်တို့မျက်မှောက်၌။ ဒီစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ဖို့မပါဘူးသူတစ်ဦးအဖို့ဘယ်လိုသိနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေစဉ်အစည်းအဝေးကိုမိသားစုများသောအားဖြင့်အဖြစ်ရှုမြင်နေတာ(ထို့ကြောင့်နှောင့်နှေးသည်အထိအလွန်အမင်းအလေးအနက်အဆင့်ဆက်ဆံရေး)၊အတွက်ပိုလန်ယဉ်ကျေးမှု၏မိသားစုများယေဘုယျအားဖြင့်ရယ်စရာရွှင်စရာနဲ့အလိုက္တဆက်ဆံရေးကိုအလွန်အမင်းတန်ဖိုး၊မိတ်ဆက်လူတစ်ဦးအဖိလစ်ပိုင်ကချိန်းတွေ့ဖို့အဒါပေမယ့်သဘာဝ။ သို့သော်ကွောကျရှံ့။ ဖိလစ်ပိုင်မိသားစုများအလွန်နွေးထွေးပျူငှာခြင်းနှင့်ရက်ရက်ရောရော။ သွားအထက်နှင့်ကျော်လွန်စေဖို့ဧည့်သည်ကဲ့သို့ခံစားရမိသားစု၏အစိတ်အပိုင်းအဖိလစ်ပိုင်။ သူတို့ကအလွန်လျှင်မြန်စွာကဲ့သို့သင်တို့ခံစားစေတမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်၏။ ပြီးနောက်အစည်းအဝေးတဲ့ဖိလစ်ပိုင်မိသားစု၊ကိုပြင်ဆင်ခံရဖို့ဖိတ်ခေါ်တိုင်းမိသားစုစုရုံးရာအကြောင်းအောက်ပါအတိုင်း။ တစ်ကြိမ် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏ဖိလစ်ပိုင်မိသားစု၊သင်မကြာမီမီးပြ ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို”မိသားစု”အတွက်။ ချက်ချင်းမိသားစုကိုသာအစွန်အဖျားရေခဲတောင်။ ရဦးကြိုပြုခြင်းဖို့အဆင်သင့်ဒုတိယဝမ်းကွဲ၊တတိယမောင်နှမဝမ်းကွဲမှကွဲပြားခြားနားသောပြည်နယ်များနှင့်အဘယ်သူ၏ဆက်ဆံရေးမိသားစုမပြုစေခြင်းငှါပင် သွေးအားဖြင့်။ င်းတို့၏ကိန်းဂဏန်းများကိုရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်အရာ၊နှင့်ရှိမရှိသင်အမှန်တကယ်ပြီးသူတို့နှင့်အတူအပြားမှာညစာစားပွဲသို့မဟုတ်သင်သာသင်တွေ့တစ်ချိန်ကသူတို့ကိုမီတဲ့အခါ၊သင်စဉ်းစားမိသားစု၊သူတို့ကဆက်ဆံပြီးသင်တို့ကဲ့သို့ထိုကဲ့သို့သော။ ပြီးမှပုံမှန်အတိုင်းရဲ့တိုးချဲ့ပါပြီမိသားစုကွဲပြားအတွက်နိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်နိုင်ငံ၊ဒါကြောင့်သင်သေချာသင်ရှိသည်လိမ့်မယ်တစ်စုံတစ်ဦးကအယူသာယူပတ်ပတ်လည်သင်နှင့်သင့်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာတွေ့မိသားစုဝင်ရဲ့ဇာတိမြို့။ ချိန်းတွေ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်၊မသာသင်ရရှိတဲ့ဖိလစ်ပိုင်မိသားစု၊သင်မူကားလည်းရရှိဖိလစ်ပိုင်။ နေစဉ်လစ္ပိုင္ယေဘုယျအားဖြင့်အလွန်ကြိုဆိုပွဲနှင့် ၊ပေါင်းစည်းသို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုံးဝဖိလစ်ပိုင်သောသူအသီးအသီးအခြားလူသိများပါတယ်ကလေးဘဝကတည်းက။ ဒါပေမယ့်နှင့်အတူ ဖိလစ်ပိုင်သိသာထင်ရှားသောအခြား၊သငျသညျအခြေခံအားဖြင့်ရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသွားသို့။ နှင့်လှည့်ကွက်မှအနိုင်ရကျော်ဖိလစ်ပိုင်သူငယ်ချင်းတွေကအားလုံးကိုဖွင့်၊ပျော်စရာ၊လွယ်ကူသော-သွား၊နှင့်ရှိခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောသဘောမျိုးဟာသက။ ဖေ့ကိုချစ်ရန်ဟာသနှင့်ကျီ။ ဘယ်လိုသိရန်စီးတလျှောက်သင့်ရဲ့အောင်ရဲ့မိတ်ဆွေများကိုခစျြလိမျ့မညျ။ နေစဉ်ဖိလစ်ပိုင်ကလည်းအဓိကအားဖြင့်အင်္ဂလိပ်စကားပြောလူမျိုး၊နေဆဲရှိပါတယ်အချို့သောအမှုအရာဟုတ်-ဇာတိရှာတွေ့စေခြင်းငှါနားလည်ရန်ခက်ခဲ။ တဦးတည်းအတွက်၊အများအပြားရှိပါတယ်တိုင်းပြည်အတွက်အကြောင်းရှိစေခြင်းငှါအပင်-ဗမာစကားပြောင္ငံျခားခြစ်သူတို့ခေါင်းထဲမှာရှုပ်ထွေးမှုများ။ သို့မဟုတ်ရုံအချို့အမှုအရာပိုကောင်းပာက့္ဂ္(အချို့၊ဥပမာအားဖြင့်စကားလုံးနှင့်အတူတိုက်ရိုက်မတတ်သော၊သို့မဟုတ်အချို့တို့သည်ပြက်သောစကားသည်သာက့္ဂ္ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမသဘောမျိုးလုပ်ရမှာမြန်မာဘာသာ)။ နှင့်အတူဖိလစ်ပိုင်၏၊သင်သာတစ်ဦးလက်ငင်းဘာသာပြန်ဆို၊သင်ကလည်းတစ်စုံတစ်ဦးရှိသည်ရှင်းပြဖို့ပိုပြီးအနုဘာသာစကားအတားအဆီးဖြစ်ကြေဟာသက။ ကျေးလက်အတွက်၊ဖိလစ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အစဉ်အနေနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ အကြောင်းသင်ယူနှင့်အတွေ့အကြုံ။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနှင့်အလွန်အမင်းကွဲပြားသောနိုင်ငံ။ ဒါဟာအလုပ်တက်အတွင်း၊အများအပြားပြည်နယ်များအသီးအသီးနှင့်အတူကွဲပြားသောယဉ်ကျေးမှုနှင့်အလေ့အကျင့်၊နှင့်အရှည်လျားစာရင်းဒေသခံဘာသာစကားများနှင့်ဌာနေပြည်သူများ။ ချိန်းတွေ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်မှသင်မိတ်ဆက်ပေးလိမ့်မည်-ဒီအခွင့်ပြုဖို့သင်တကယ်အလိုတွင်အပေါများကြွယ်ဝတိုင်းပြည်၏၊သင်သေချာထိုသူတို့သည်မိမိတို့ဖြစ်လိမ့်မယ်အဘို့အတက်ကြိုးစားနေ၊အသစ်ကွက်စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်လူတိုင်းခဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကယောင်က၊အထင်ရှားပေါက်-အမှတ်တရပုံသောအစေခံဖို့စစ်မှန်ဆံု။ ဘာတောင်မှပိုကောင်းကြောင်းအများစုကဖေ့သိမိမိတို့လမ်းပတ်လည်မီးဖိုချောင်။ အလွန်အနည်းဆုံး၊သူတို့သိပါလိမ့်မယ်ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုဖွင့်ဆိုလိုချိန်းတွေ့အဖိလစ်ပိုင်လိမ့်မည်အလွန်ဖွယ်ရှိတွက်ချက်ပေးတဲ့အကြီးအုိေ အဖြစ်ကောင်းစွာ။ အများဆုံးအဖေ့သယ်ဆောင်နိုင်တစ်တေးသွားကိုစိုက်(ဖြစ်နိုင်သည်ကြောင့်သူတို့ပြီးပြီကောင်းပြီ-လေ့ကျင့်သင်ကြားကလေးဘဝကတည်းကအားလုံးမှအဆို၊သူတို့မှာမိသားစုပါတီ)။ သို့သော်လျှင်ပင်သင်၏ဒါရဲ့အသံမပါဘူးဖြစ်သောသူအပေါင်းတို့သည်ကောင်းတယ်၊မပါဘူး ဆိုလိုပါလိမ့်မယ်ချစ်ကေမည်သည့်နည်းသောကြောင့်ပင်အမြိုးမြိုးမည်မဟုတ်ရှက်သွားမှမိုက်ခရိုဖုန်း။ ဒါကြောင့်ပင်လျှင်စက္ကူမဟုတ်၊ယုံကြည်မှု၏အဖိလစ်ပိုင်အတြက္ေရာအုိေကဆုိင္မ်ားတြင္လုံလောက်တဲ့အာမခံအတွေ့အကြုံဖြစ်သွားတစ်ဖွဲ့လုံးတွေအများကြီးပျော်စရာ၏။ မသာလစ္ပိုင္ကြီးမှာချက်ပြုတ်နှင့်အုိေ၊ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ကူးကိုခရီးသွားလာပေါင်းအဘော်။ လစ္ပိုင္စွန့်စား၊အထူးသဖြင့်ကြွလာသည့်အခါအစားအစာ။ တူ၏အရေအတွက်၊အနည်းငယ်သောအမှုအရာနျ့လိမ့်မည်ဟုလစ္ပိုင္အခါတာဝန်ထမ်းဆောင်တစ်ပန်းကန်ပေါ်။ ဒါကြောင့်၊သူတို့ဖွယ်ရှိဆန္ဒရှိဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပင်အများဆုံးထူးထူးဆန်းဆန်းခဲနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်အတွက်။ သူတို့လည်းချက်နဲ့။ သူတို့ကမကြိုက်ဘူးဖြစ်စေတဲ့အပျော့နှင့်သူတို့ကြိုးစားဖန်တီးရန်အနည်းဆုံးပမာဏ၏ဒုက္ခလူတိုင်းအတွက်၊ဒါကြောင့်သူတို့ကအလွန်လွယ်ကူမယ်။ နောက်ထပ်အရာသည်ချစ်ကြောင်းကောင်းတစ်ဦးသဘောတူ။ ဒါကြောင့်၊အခါသင်အတွက်အဘယ်မှာရှိနေတဲ့တိုင်းပြည်စျေးဝယ်ပုံမှန်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများအတွက်အချို့ ၊သင့်ရဲ့ဖိလစ်ပိုင်ဒါကြောင့်နှိမ့်ချမှု၏စျေးနှုန်းကိုသင့်လိမ့်မည်ဖြစ်နိုင်သည်ပင်အယူအပျော်အပါးအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး။ နောက်ဆုံးတော့၊ ဖေ့မေတ္တာဓါတ္ပံုသူတို့ကိုယူပြီးအတွက်။ ဒါကြောင့်၊သင်ပျော်မွေ့လွလမ်းလျောက်မှသင်၏ခရီးကိုအတူ -ထိုက်ပုံ၊သင်ယခုသင်သိသင့်ဖြစ်ခရီးသွားလာနှင့်အတူ။ ကျနော်တို့ကနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်ကွတ်ကီးများကိုသုံးပါမှပိုကောင်းသင့်လိုအပ်ချက်နားလည်သဘောပေါက်၊စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာခြင်းနှင့်တကွသင်ပေးရန်ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းအရာနှင့်ကြော်ငြာများ။
မှုကြောင့်သိသာထင်ရှားသောအသံုးျပဳသူမ်ား၏ခြေရင်းထက်ပိုသန်း(နှင့်ဤအရေအတွက်အဆက်မပြတ်ကြီးထွားလာ)၊နှင့်အတူကတိပေးမှသင်မိတ်ဆက်ဖို့လှပသောဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးမှကမ္ဘာအနှံ့၊ကပြီးပြည့်စုံသောအရပ်သည်အာရှတစ်ဦးတစ်မတ်ေတာအတှကျရှာဖွေနေ၊ချိန်းတွေ့၊အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး-နှင့်ဖြစ်ကောင်းသင်ဖြည့်ဆည်းသင့်အသက်တာ၏မေတ္တာကို။ နှင့်အတူမိုဘိုင်းအက်ပ်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်အကောင့်သစ်နှင့်စတင်ရေးသားခြင်းသင်၏မေတ္တာဇာတ်လမ်းမိနစ်အနည်းငယ်အဘို့။ ဒါဟာအာရှအချိန်းတွေ့အက္ပ္ကိုဘို့အသည်စုံလင်သည်ဖိလစ်ပိုင်ချိန်းတွေ့လွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ရှာတွေ့မှသင်၏ဖိလစ်ပိုင်အလှ။ ယခုစတင်ရာက္ၾလစ္ပိုင္ႏ။ (ယခင်ကအဖြစ်လူသိများ)သည်အစိတ်အပိုင်း၏ရေတွင်းတစ်တွင်း-လူသိများလွယ်သောလည်ပတ်ရန်ထက်ပိုမိုသုံးဆယ်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များနှင့်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာနှင့်အတူစည်းလုံးညီညွတ်တစ်ဦးတစ်ယောက်၏လစ္ပိုင္၊နှစ်ဦးစလုံးပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမှာ၊ကျွန်တော်တို့ပူဇော်သင်လုံခြုံပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာအက္ပ္မ်ားရသင်ကူညီလိမ့်မည်အကျွမ်းနှင့်အတူအာရှနှင့်ဖိလစ်ပိုင်မှအမျိုးသမီးများကကမ္ဘာအနှံ့။ ဒါဟာမျိုး၏ဝက်ဘ်ဆိုက်။ ကွာရှင်း။ ဒါကြောင့်မဖွစျနိုငျသောသာအခမဲ့ဗားရှင်းအားလုံးအဘယ်သူသည်မိန်းကလေးငယ်များရေးသားဖတ်မနိုင်အမည္၊နေလည်းရှိပါတယ်ယံ။ စတင်ရေးသားဖို့အားလုံးဆက်တိုက်နိုင်ရန်အတွက်၊လွန်း။ မဖြစ်ဘူးလို့ဝယ်ယံ။ လာစေသည်။ ။ မေးသောအဆွေခင်ပွန်း။ ဒါဟာမျိုး၏ဝက်ဘ်ဆိုက်။ ကွာရှင်း။ ဒါကြောင့်မဖွစျနိုငျသောသာအခမဲ့ဗားရှင်းအားလုံးအဘယ်သူသည်မိန်းကလေးငယ်များရေးသားဖတ်မနိုင်အမည္၊နေလည်းရှိပါတယ်ယံ။ စတင်ရေးသားဖို့အားလုံးဆက်တိုက်နိုင်ရန်အတွက်၊လွန်း။ မဖြစ်ဘူးလို့ဝယ်ယံ။ လာစေသည်။ ။ မေးမိတ်ဆွေမှတ်ပုံတင်ရန်။ လိမ့်မည်မယုံကြည်နိုင်ဘူး၊နှင့်အားဖြင့် ။ နှင့်ငါ့အပေါင်းအဘော်နှင့်ငါကအလွယ်တကူတွင်ဓြှု။ ဆြဲသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သုံးသပ်ချက်။ နှင့်သောစျေးနှုန်းပရီမီယံမဟုတ်သေး။ သင်မည်သည့်ပြဿနာမျှရှိပါက၊ထို့နောက်ငါတို့သည်သင်တို့ သင်ကူညီလိမ့်မည်ဇောင်း။ ကျွန်တော်တို့ကိုရေးလိုက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါအီးမေးလ်ကနေတဆင့်။ အီးမေးလ်။ ကျနော်တို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့မေးခွင့်လွှတ်ခြင်းအဘို့အဘယ်သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အက်ပ်မျှော်လင့်ချက်များဖြည့်ဆည်းသင့်ရဲ့မပြု။ သင်မည်သည့်ပြဿနာမျှရှိပါက၊ထို့နောက်ကျနော်တို့ဝမ်းမြောက်စွာကူညီဖို့ဇောင်း။ ကျွန်တော်တို့ကိုရေးလိုက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါအီးမေးလ်ကနေတဆင့်။
ဖိလစ်ပိုင်ချိန်းတွေ့-ပထမဦးဆုံးနှင့်သာအက္ပ္ကိုအတွက်ချိန်းတွေ့နှင့်ခရီးသွားလာအတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊နှစ်ခုအတွက်တစ်ခုတည်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများကမ္ဘာအနှံ့မှ။ သင်ဆန္ဒရှိအချိန်အများကြီးသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ဖိလစ်ပိုင်၊သင်မူကား၊တစ်စုံတစ်ဦးအထူးမျှဝေဖို့ဤအတွေ့အကြုံနှင့်အတူသို့မဟုတ်ကိုတိုက်ရိုက်သင်ဖို့အပိုင္။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်ပိုင္-သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းရှာဖွေသင့်ရဲ့အဖော်အတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ။ ဤဝန်ဆောင်မှုအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်တည်းခရီးသွားများအတွက်ရှာနေကြသူမိန်းကလေးတစ်ဦးသို့မဟုတ်ယောက်ျားနှင့်အတူအညီခရီးသွားလာအစီအစဉ်ကိုနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအချိန်ဖွင့်လှစ်ရန်အတွေ့အကြုံနှင့်ဤအံ့သြဖွယ်တိုင်းပြည်။ ဒေါင်းလုပ်အက္ပ္နေ့နှင့်လေ့လာသင်ယူစတင်ရန်အတူတကွဖိလစ်ပိုင်အလှနိုင်ငံနှင့်ကျွန်းများ။ သင်ဖူးပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးတည်းခရီးသွားအတွက်။ ခရီးသင့်ရဲ့အိပ်မက်တွင်ဖိလစ်ပိုင်နှင့်လက်ခံရရှိမက်ဆေ့ခ်ျများမှခရီးသွား၊ဘယ်မှာအစဉ်အဆက်ကြသည်။ ဒါဟာဘေးကင်းလုံခြုံပြီးအလွယ်တကူနှင့်သင်သာစက္ကန့်ရှာဖွေဖို့အဖော်။ သင်ရှိသည်လိမ့်မည်ဒါကြောင့်အများကြီးပျော်စရာနဲ့အတူတူရယ်မော။ သင့်ရဲ့အံ့သြဖွယ်အားလပ်ရက်များအတွက်အလံတင်ဒီမှာချိန်းတွေ့နှင့်အတူ။ ရှာဖွေသင့်ရဲ့စံပြပဲ၊ပြီးတော့ဒေါင်းလုဒ်တပ်ဆင်အခုအချိန်မှာ။
© 2020 ဗီဒီယိုက ချက်တင် ဖိလစ်ပိုင်